ANKOLAFY RAVALOMANANA : HISY KRIZY VAOVAO ETO RAHA TSY HANDRAY ANJARA AMIN’NY FIFIDIANANA IZAHAY – MyDago.com aime Madagascar
Nitohy tetsy amin’ny Magro Behoririka androany ny hetsiky ny vahoaka mpomba ny Ankolafy Ravalomanana. Tsy nihemotra ireo vahoaka na dia teo aza ny firotsahan’ny orana teto an-drenivohitra tao anatin’ny andro maromaro izay. Toy ny mahazatra dia misy hatrany ny lahateny nifandimbiasan’ireo mpitarika tonga teny an-toerana. Anisan’ny nandray anjara fitenenana tamin’izany ny Ct Mamisoa. Nivoitra tamin’ny kabariny ny mbola tsy hampiharan’ny Rajoelina an-tsakany sy an-davany ny tondrozotra. « Aoka hoy izy mba hanara-dalàna ireo olona izay voakasika amin’ny tokony hampiharana ny tondrozotra ». Namafisiny fa tsy maintsy tanterahana izay voalaza ao anatin’io tondrozotra io. Andriamatoa Fidison izay nisolo tena ny Ankolafy Zafy kosa dia nilaza fa ny safidim-bahoaka dia i Dada ihany. Noho izany dia mila mody izy fa izay no takian’ny vahoaka Malagasy. Momba ny FFM dia nambarany fa ny Pr Zafy dia tsy hiditra ao anatin’io FFM io raha io endriny amin’izao fotoana izao io. Rehefa mirodana ny fitondran-dRajoelina hoy Fidison ary eken’ny fikambanana iraisam-pirenena ny fitondrana izay hajoro eo vao miditra amin’izany izy. Mikasika ny fifidianana dia nambarany fa lalam-panorenana inona no hifidianana ny filoham-pirenena eo. Raha ny lalam-panorenana kitoatoa nataon’ny fat tamin’ny 2010 hoy izy dia tsy ekentsika. Ny Ct Leriva Manahirana dia nanazava tamin’ny vahoaka tonga teny an-toerana ny antony hilazan’ny Ankolafy Ravalomanana fa raha tsy tonga i Dada tsy handray anjara amin’ny fifidianana izy ireo. Namafisiny fa ny kandida ho an’ny Ankolafy Ravalomananana dia mbola any am-pita. Ny filaminana ihany koa dia mbola manjaka ny jiolahy manerana ny Nosy. Tsy mahazo fitenenana ihany koa ireo manohitra ny fitondrana. Farany dia nambaran’ny Cst Leriva fa krizy vaovao no hisy eto raha tsy mandray anjara ny Ankolafy Ravalomanana.
Auteur Solo Razafy*Publié le 21 mars 2013 22 mars 2013 Catégories Politique
18 pensées sur “ANKOLAFY RAVALOMANANA : HISY KRIZY VAOVAO ETO RAHA TSY HANDRAY ANJARA AMIN’NY FIFIDIANANA IZAHAY”
badraodra dit :
enfin de bonnes news!on jette les gants par manque de credibilité!on le savait!les urnes ne plaisantent pas!à bas les masques !quelle lacheté!
Mahafinaritra ilay firaisankina fa tohizo! mankasitraka tompoko isany ô!!!
21 mars 2013 à 23 h 42 min
Rahoviana vao hifantoka ao an-dohantsika raha tsy tontosa ny tondrozotra dia tsy ho tafaverina ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC vofidin’ny Vahoaka..
mihezaka ny SADC ampian’ny CIG-M avy amin’ny CPS-n’ny UA..ka ny fe-potoana farany nomen’ny UA azy ireo hahavitana izany fanantontosana izany dia ny 1er avril 2013..
izay no fipetraky ny resaka atrizao.
Ny fahatongavana ny Filoha et ANTANINDRAZANA dia midika fa milamina ny Tany ary misy ny fahatoniana..
Heveriko toa ny fiheveran’ny Rehetra fa ny fampilaminana ny Tany sy sy ny fiverenan’ny fahatonina no misy milalao ary izany lalao izany dia heverin’iy ireo fa ho lefitry ny SADC sy ny UA..mandrakizay..
Manaraka izany dia iarahantsika mamaky etsy sy eroa ny fahasahiran’ireo orin’asa very fanana tamin’ny 26 janvier 2009 : tsy ny Groupe TIKO ihany ,fa ao ny orin’asa belge , ao koa ireo tompon ‘nya tours opérator sy ny agences de voyage izay frantsay no akamaroan’izy ireo.. izay tsy faly amin’ny fahasimban’ny air Mad ,izay tsy manana avions intsony ,any ka mijaly ireo mpizaha-tany tsy misy mitatitra nefa fohy ny fotoana anany manao izany fizahan-tany izany..
Koa misy feo mandeha fa hifototra amin’ny Fitondrana frantsay ireo frantsay tompon’ireo orin’asa miatrika fahasahiranana noho ny kitoatoa nataon’ny putscistes izay tohanan’ny Fitondrana frantsay ..!
Ho heken’ny Fitondrana frantsay ve ny mijery fotsiny ireto frantsay sahirana noho ny vokatry ny politiquen’ ny Fitondrana frantsay nihentehatra tamin’ny putschistes tsy misaina ,fa miedinedina sy faly mameno ny paosiny..
Toa miharatsy dia miharatsy ny » toerana sy ny fanjakan ‘ny pustcistes » ary toa hihazakazaka ho any an-kady ireto izy !
Mandeha ny andro, volana , taona, dia iny isika fa mbola ao anatin’ny krizy ihany, ary toa miha-maizina dia maizina ny hoavin’ny Firenena !
Nisy fanonaganam-panjakàna tamin’ny volana mars 2009, fanonganam-panjakàna izay nahazahoan’ny firenena malagasy « sazy », satria nisy « ampahan’ny Accord de Cotonou » nampiarina !
Ny Accord de Cotonou dia manentitrentitra fa ireo izay nahavita heloka be vava dia tsy tokony andray anjara amin’ny famerenana ny ara-dalàna akory ! Nojonoina tamin’ny resaka Fihavanana izay lazaina fa tena soatoavina malagasy ny vahoaka, dia NAVELA HITANTANA NY FANJAKÀNA MIHINTSY IREO MPANONGANA.
Iaraha-mahalala ny vokatr’izany, ary tsy ho voatanisa eto !
Mandeha indray ny resaka any ho any, fa hanao valan-dresaka amin’ny mpanao gazety ny ankolafy Ravalomanana androany angamba izy izay ; ary ny fanambaràna ho atao amin’izany dia toa hoe, ho ekena ny fiverenan-dry zareo namadika rehetra, ary hilatsaka amin’ny fifidianana solombavam-bahoaka ry zareo !
Asa na marina io na tsia, fa ny hitsikitsika hoe tsy mandindihy foana ?
Fanontaniana, satria hiatra amin’ny Fiainan’ny vahoaka malagasy ny vokatry ny fanapahan-kevitra :
1) Tsy manan’olona, rafitr’asa, fotom-pisainana madio, ary tsy afaka manao pôlitika angaha, raha tsy miaraka amin-dry zareo mpamadika ?
2) Angaha fandraisan’anjara amin’ny fifidianana ho Filoham-pirenena ihany no noresahin’ny Filoha Ravalomanana ? Ny ao an-dohanareo izany dia tsy maninona na tsy misy Kandidà aza ny ankolafy Ravalomanana amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena fa ianareo rehetra kosa, tsy maintsy hiaraka amin’ny mpanongam-panjakàna amin’izay fifidianana ho atao rehetra ??
3) Sahinareo indray ve no hilaza fa tsy mazava, na tsy izany ny hafatry ny Filoha ?
Sao dia mba tsy mety ry zareo â !
Azo lazaina hoe « Gentlemen agreement » io Tondrozotra io, na « Pièges à cons » mihintsy aza hoy ny sasany !!
Na inona na inona andraisan’azy, natao sonia ilay izy dia mba tanteraho ; na ianareo « cons » na « gentlemen » !! Aza dia tia-tena fa mba ny hoavin’ny Firenena jerena !!
Mino aho fa tsy isika akory sanatria no mihevitra « hamboly krizy » na oviana na oviana. Efa fanotana fady amin’ny taranaka fara mandimby izao fanonganam-panjakana niteraka fanapotehana ny firenena izao. Ny tsy azo ihodivirana dia ity: tsy hisy fiverenana amin’ny ara-dalàna amin’ny alàlan’ny fifidianana eken’ny rehetra eto raha tsy tanteraka antsakany sy andavany aloha ny fampiharana ny tondrozotra!
Tsy hisy fampandrosoana vanona raha tsy misy ny FILAMINANA, tsy misy filaminana raha tsy misy FITONIANA, tsy misy fitoniana raha tsy misy fifamelàna ray tsy hisy FIFAMEL0NA raha tsy misy FIEKEN-KELOKA.
Ny Filoha Ravalomanana dia efa nanao izany FIEKEN-KELOKA izany tamin’ny fanambaràna nataony raha izy nanangana ny « Directoire Militaire » ary mbola nohamafisiny tany Maputo izany raha nialatsiny tamin’ny Filoha Ratsiraka izy sy ny Filoha Zafy Albert.
Fa ireo rehetra voakasikin’ity krizy ity ve mba nanana fanetren-tena toy izany ? na ny Filoha Ratsiraka izany na ny Filoha Zafy izany ary indrindra moa Andriamatoa Rajoelina izay tena rangory fototr’ity krizy ity. Raha tena olona tia tanindrazana marina ireo olona sasany ireto dia tokony hanao izany, tokony ho fantany fa teny kely iray fotsiny dia ny « FIALAN-TSINY » amin’ireo izay nahatsiaro voa mafy sy amin’ny vahoaka Malagasy iray manontolo dia afaka hamaha tanteraka izao krizy izao.
Raha momba ny fodian’ny Filoha Ravalomanana dia efa mazava ny voalazan’ny tondrozotra ka tokony tsy hiadian-kevitra intsony, ary raha jerena amin’ny maso tsy miangatra dia nahoana moa izy no tsy afaka mody kanefa ireto lehiben’ny movansy sasany dia afaka miriaria eto an-toerana (Rajoelina sy Zafy) ary afaka miditra sy mivoaka ny tanindrazana araka izay sitrapony (Ratsiraka). Ireo movansy ireo anefa dia mino aho fa samy handrotsaka « candidat » amin’ny fifidianana rehetra ary afaka hanontrona an’izany eto an-toerana ireo lehibeny, ka nahoana ny lehiben’ny movansy Ravalomanana no tsy mba avela hanontrona ny azy ? Ny tsy famelana azy hody an-tanindrazana dia efa midika sahady fa tsy mazava izay fifidianana ho atao eto fa efa misy sahady fandemena mialoha izay tsy tiana hitondra.
Koa rariny ny an’ny movansy Ravalomanana raha tsy handray anjara amin’ny fifidianana raha tsy tafody ny lehibeny. Ho krizy be hafa indray anefa ny hiseo vokatr’izay, ka iza no tompon’andraikitra amin’izany ? Ny tsy avela mody ve sa ny Mpanakana tsy hody ? Anjarantsika Malagasy tsirairay avy ny mamaly an’izany.
Ny zavatra niseho teny Ambohitsirohitra dia efa fantatra hoe iza no tompon’andraikitra tamin’iny !
Raha nisy fahadisoana nataon’ny Filoha Ravalomanana (izay nozakainy amin’ny maha Filoham-pirenena ny tenany, na dia tsy avy aminy foana aza ny loharanon’ny fahadisoana), dia angamba 1/1000e -n’ny ataon’ireto tsy valahara ireto fotsiny. Ampanentrehan-tena no nanehoan’ny fialan-tsiny tamin’ny vahoaka, ary deraina izy noho izany.
Marina daholo ny voalazanareo ireo ry Mbly sy Ranja Randria, ary izay no nahatonga ahy hanontany hoe ho « Gentlemen » sa « Cons » ! Ny mpanongana raha ny zavatra nataony sy mbola tohizany atao dia tsy ho « Gentlemen » mihintsy !!
Ny fanontaniana tokony apetraka amin’ny rehetra amin’izao vanin’andro sarotra izao, dia ny hoe : Iza no tianareo na MBOLA TIANAREO HO FILOHAM-PIRENENA ??
Ny vaovao hivoaka ato ato dia mety hanamarina fa voafitaka ny vahoaka satria « natoritory » ireo mpitarika, ary mety nihiniana natao akory aza angamba izany. Fa dia ho ren-tsika na ho hitan-tsika eo ihany ny vaovao !
Tsy maintsy ankihinina amin’ireo mpanao pôlitika ireo foana ve ny hoavin’ny Tanindrazana, na dia manao ny tsy mety aza ry zareo ? Inona no mba anjara-birikin’ny VAHOAKA IZAY TENA TOMPON’NY FAHEFÀNA HOY ILAY OLONA IRAY IZAY ???
Nisy afrikàna izay tafaresaka taminay (telo na efatra izahay) tamin’ny asabotsy teo, ary nanontany hoe : Inona marina moa no tena olanareo malagasy, satria efa fantatry ny rehetra (Afrika) ny zava-miseho any aminareo ?
Lazainareo fa tohanan’ny frantsay ny mpanongana hoy izy, fa maninona ny vahoaka no tsy mitsangana, manohitra an’izany ?
Dia novaliako hoe : Mafy loatra ny herim-pamoretana any ka voadaroka amin’klimôzena sy voatifitra, izay mitsangana rehetra !!!
Dia hoy izy : Hay ve ilay ho faty mihintsy izany no atahoranareo malagasy ! Hahafaty firy eo anefa ry zareo raha mihetsika daholo ny vahoaka ? Tsy mbola tena vonona hiaro ny zo-nareo izany ianareo, ka tsy mahagaga raha mitarazoko toy izao ny krizinareo !
Tsy misy olona hanampy anareo eo, raha ianareo aza tsy taitra sy vonona ! Toa tsy fantatrareo akory izay tena tadiavinareo !!
Tena marina io voalazako io, ary dia tsy hita izay namalian’azy, satria marina dia marina loatra !! Ny tena indray no sadaikatra teo anatrehany !!
Na dia izany aza, mba hahafahàna mijery tava amin’ny fitaratra, dia tsy maintsy tohizana ny tolona ! Tsy zava-poana araky ny filazan’ny sasany azy iny hetsika tamin’ny asabotsy iny, fa mbola betsaka ireo vazaha tsy mahafantatra ny zava-miseho any an-tanindrazana, ary menatra amin’ny zavatra ataon’ny mpitondrany any !
Misy olom-boafidy frantsay maromaro izao efa mba vonona ny hanohana ny vahoaka malagasy, ary hisy Pejy Facebook hisokatra hono ato ato ; endriky ny fiarahana amin’ny « mpitolona malagasy rehetra » izany !
Mahereza daholo ! Sokafy ny maso sy ny saina ! Tohizo ny tolona fa masina ny Tanindrazana !
Izaho ve no tsy mahazo resaka? sa…?
Raha tsy tanteraka na, feno ny conditions rehetra ao anatin’ny FR dia tokony: « TSY mandray anjara amin’ny fifidianana ny ankolafy! Ary tokony hisitaka mihintsy daholo amin’io sarin-tsarim-pitondrana io ianareo!!! »
Vita ny ala-nenina e!!!
Condition « SINE QUA NONE »: « M I V E R I N A NY ANTANIN-DRZANA M A L A L A K A NY FILOHA R A V A L O M A N A N A!!! »
Noho izany, tsy misy dikany ary tsy tonkony handray anjara amin’io resaka fifidianana io, satria ny fizirizirina hanatanteraka an’io ao anatin’izao rafitra mitongilana izao no tena hitarika Krizy!!!
Koa, ahoana moa, ary inona no tena tiana ho lazaina amin’io tenin’i atoa Leriva hoe: « Hiteraka krizy hafa ny tsy fandraisan’ny ankolafy Ravalomanana amin’ny fifidianana??? »
Tsy efa anaty krizy tanteraka ve isika??? Ary ny fanekena handray anjara hanao an’io fifidianana io ao anatin’izao rafitra miangatra, ary tandrametaka izao ve dia hahavaha ny krizy aminareO???
Na efa voalaza aza dia haveriko ihany fa mbols misy bemarenina. Tantrahana aloha nt tondrozotra fao miroso @ fifidianana.
Clap Clap Neninoro !! Dakôro à 100 % aminao sy LAZALAZAO ( Na any amin’ilay post iray farany aza ) !!!
Ny fandraisana anjara amin’izay FIFIDIANANA REHETRA, raha mbola tahak’izao no fizotran’ny raharaha, dia tsy inona akory fa FANOHANANA MAZAVA AN’IREO MPANONGANA, ARY IREO MPAMADIKA !!
Mba misy mieritreritra ny zavatra hiainan’ireo nogadragadraim-poana ve ireo olona mitonon-tena ho mpiaro ny ara-dalàna ireo ????
Gadra pôlitika hono ! Tsy misy mpitsetra, tsy misy mpamangy satria TSY AZO VANGIANA (INONA NO ANTONY ?), tsy misy mba manampy kely na dia ara-tsakafo aza kanefa sahirana ny havany, sns…….
Signes d’apaisement ve izany ry zareo ??
Nisokatra daholo ve ny haino aman-jery ?
Narahina ara-bakiteny daholo ve ny andinin’ilay tondrozotra ?? Tsy asiana resaka intsony ny Fanankànana ny Filoha satria tena zavatra tsy azo leferina !!
Ny fiainam-pirenena, ny fiainam-bahoaka potika daholo !! Dia tena mitovy tamin’io voalazanao io mihintsy ny eritreritry ny rehetra ry Neninoro ! Krizy inona indray ? Tsy efa miha-mafy isan’andro ve ilay izy, koa hampiova inona ????
Ny fijanonana ao, dia famantsiana ny sezan’izy rehetra ireo mba tsy hiongana !!
Ho an’ilay ranamana iray : I « Lily » araky ny fanambaràna rehetra izay nataony, dia tsy mitady na mpitady toerana ; ny Filoha Ravalomanana no nametrak’azy eo amin’io toerana misy azy io ! Ny faniriany hono dia ny miverina any amin’ny fiainana sivily rehefa vita ny krizy !!
Ny fantatra koa dia manao izay azony atao izy ; ary indraindray tsy mahafaly ny sasany ny ataony satria manelingelina !
Farany : Enjehina izay miseho ho mahavita ?? Inona no maha diso an’izany satria « miseho » fotsiny ???
Tsy mety ary tsy azo atao ny manenjika AN’IZAY TENA MANAO SY MAHAVITA !!!!!
Tsy mety amin’ny tena mpitolona ny promesse d’ivrogne, ny faire semblant sy ny paraître ê ! Fomban’i domelina izany !
Dia manaiky izany famerenana ireo mpamadika ireo izany VE IANAO RY DADA MALALA????
Raha izay no marina dia ianao indray no ho voahosi-potaka miaraka @’ireo JIOLAHY POLITIKA
IREO, dia na izany na tsy izany ry dada dia mba TSINJOVY IHANY ilay vahoaka NIARITRA NY
MAFY @ fitakiana ny fiverenanao .
Mino aho ry dada fa tsy ho TERENA INTSONY IANAO HANAIKY FA HOE « METY AMINTSIKA IZAO « .
METY @’IREO JIOLAHY POLITIKA ILAY TETI-DRATSY FA TSY AMINTSIKA VAHOAKA VELIVELY,
Koa mahatoky ny fahendrenao izahay ry dada fa tsy HAIKINAIKY FAHATANY EO INTSONY IANAO.
Rehefa tonga ianao manapaka izay ho tapahanao fa tsy kotovelo mihintsy no handidy dia homana @
TOERANAO RY DADA nefa efa hita fa JODASY BE EFA TSY TAKONA HAFENINA INTSONY.
Le Président prend les devants et les affaires en main !!
MBA TSY HISIAN’NY TSY FIFANKAZAHOAN-KEVITRA INTSONY, dia hihiditra mivantana (video-conférence) ao amin’ny Hôtel Carlton ny Filoha Ravalomanana, hanazàva amin’ny rehetra ny Lalàna tokony hizorana, sy ny tanjona tokony ho tratràrina !!!
Tsy hisy intsony ny hoe : Tsy izany ny « nahazahoanay » ny teniny, na tsy izany no nolazainy, sns… !!
Mijaly ny vahoaka malagasy Andriamatoa Filoha hajaina ary diso fantatrao izany, ary mbola manantena anao mafy anefa !! Miangavy anao izahay, mba lazao kely amin’ireo mpitarika ireo, ary indrindra amin’ny vahoaka ny andraikitra tokony ho sahanin’ny tsirairay avy, raha mbola mitohy IZAO TSY FANAJÀNA an’ilay tondrozotra izao ! Tena very hevitra mba tsy hilazàna hoe very fanahy mantsy ny vahoaka, na dia eo aza ny fanantenàna sy ny hafanam-po !
Mankahery anao Andriamatoa Filoha hajaina, ary Andriamanitra anie hitahy sy hombanao hatrany, satria mbola betsaka ny adidy ho tontosaina izay napetrany aminao !
GUY JUMELLE dit :
hatreto aloa dia mbola ny tim no role fa ny ankoatr’izay deba daholo
Ohatry ny mampiheritreritra be tokoa iry lohateny ambony iry an???
toa ho an’iza no hilazana io hafatra io???dia avy @’iza marina ilay
hafatra, fa toa nifanontona t@’ilay hafatry dada mantsy ilay izy ka mampiheritreritra be ihany??
Miasa mafy Atra !!!mbola manavaka ny vary sy tsiparifary Atra.
Noheveriko fa lasa….i RaConstance ! MDR !!!
Video-conférence reportée à….! Patience, est un terme que les malgaches connaissent bien !
23 mars 2013 à 0 h 25 min
F’inona ary ity ry Kintana ???
Jereo tsara 12h 12mn -13h 13 mn- 16h 16mn???
Fambara tsara sa fambara ratsy???enga anie ka ho tsara!
dia inona loatse ly no tsy foinareo amininy lehilahy iny sa i madagascar saika lasaentreprisenazy raiky avao
Précédent Article précédent : Hoy ny Filoha : « Tsy handray anjara amin’ny fifidianana na filoham-pirenena na solombavambahoaka isika raha tsy tonga any Madagasikara aho »
Suivant Article suivant : Ankolafy Ravalomanana : Nampiseho ny firaisankina tany Manjakandriana